Saturday January 09, 2021 - 21:42:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ardaydan ayaa ka gudbay imtixaankii kama dambaysta ahaa ee sanad-dugsiyeedka 1441-1442 Hijriyada.
Ardayda ayaa soo qaatay waxbarasho dhanka shareecada ah oo socotay muddo 5 sanadood ah, 2 kamid ah sanadahaas waxay kusoo qaatteen macaahidda qabaa'ilka ee wilaayaatka Islaamiga ah, halka 3 sano oo kale ay kusoo qaatteen machadu shariica.
Munaasabado lagu maamuusayo ardaydaas qalinjebisay ayaa waxay ka kala dheceen wilaayaatka Baay iyo Bakool iyo Galgaduud kuwaas oo ay kasoo qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayaatka Islaamiga ah sida culumada, ugaasyada, nabadoonada, nuqabada, aqoonyahanada, waalidiinta ardayda iyo masuuliyiin katirsan xarakada Al-Shabaab.
Masuuliyiinta ka qayb galay munaasabadda qalinjebinta ardayda ayaa waxaa kamid ahaa Afhayeenka Xarakada a Al-Shabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage, Sheekh Fu'aad Maxamad Khalaf, Sheekh Yuusuf Kababutukade, Sheekh Xassan Yacquub Cali iyo Mas'uuliyiin kale oo fara badan.
Ardayda ayaa waxaa la gudoonsiiyay shahaadooyinkii qalinjebinta ee machadka shareecada, iyagoo sidoo kale lagudoonsiiyay hadiyado qaali ah oo ay ku jiraan Kombuyuutarro iyo lacago caddaan ah.
Qaybta labaad ee ka qalinjebisay machadka ayaa waxaa ka horeeyay qaybtii koowaad oo ka koobnayd 124 arday kuwaas oo qalin jebiyay bishii Maarso ee 2019.
Hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo Agab waxbarasho gudoonsiisay Ardayda Dufcada labaad ee Deeqda Waxbarasho.
Sawirro: Dufcaddii 6aad oo ka qalin jebisay Machadka daraasaadka Qurdubah.
SOHEDA oo soo bandhgitay 100 arday oo waxbrashadooda kafaala qaaday Hayada Hormuud Salaam Foundation